တူမောင်ညို – လူထုအင်အားနဲ့ သင်ကြားမှသာ သူတို့ ယဉ်ပါးလိမ္မာ လာကြလိမ့်မယ် | MoeMaKa Burmese News & Media
တူမောင်ညို – လူထုအင်အားနဲ့ သင်ကြားမှသာ သူတို့ ယဉ်ပါးလိမ္မာ လာကြလိမ့်မယ်
လူထုအင်အားနဲ့ သင်ကြားမှသာ သူတို့ ယဉ်ပါးလိမ္မာ လာကြလိမ့်မယ်
“ကျွန်တော်တို့က အရေအတွက် အင်အားပြပြီးတော့ ခြိမ်းခြောက်တာမျိုးမဟုတ်သေးပါဘူး၊ ဘာကိုပြလဲဆိုတော့ ကျွန်တို့ ပြည်သူလူထုရဲ့ အရည်အချင်းကိုပြတာပါ” (မင်းကိုနိုင်)
ဒါ့အပြင်လောလောဆယ်မှာ ကိုကိုကြီးမှာ“မှတ်ပုံတင်နိုင်ငံရေးပါတီ”မရှိ၊ “လွှတ်တော်အမတ်”လည်းမဟုတ်သေးတဲ့အတွက် ကျနော်တို့ ပေါင်းဖို့ခက်နေပါတယ်လို့ ကြံ့ဖွံ့ပါတီဘက်ကများ အားနာပါနာငြင်းခဲ့ရင်မခက်ပါလား။ ]
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ (ဦး) မင်းကိုနိုင်၊ (ဦး) ကိုကိုကြီးတို့က တောင်းပန်၊ချော့မော့၊ပန်ကြားပြောဆိုနေသော်ငြားလည်း၊ ကြံ့ဖွံ့ ပါတီ၊ ကြံ့ဖွံ့အစိုးရတို့ဘက်မှ တုန့်ပြန်မှုများဟာ ရိုင်းစိုင်းကြမ်းတမ်းလွန်းလှပါတယ်။
(RSO) တွေကပဲ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေသလိုလို၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ပဲ စစ်ခင်းရတော့မှာလိုလို သတင်းတွေ နဲ့ ပွဲလှန့်ပေး တယ်။ ဒါ့အပြင် လေးမျက်နှာ၊တပ်ကုန်း၊ လယ်ဝေးစတဲ့ မြို့နယ်အချို့မှာ “ပုဒ်မ ၄၃၆နဲ့ ပုဒ်မ ၅၉ (စ) မပြင်ဆင်ရေး” ဆိုင်းဘုတ် လေးတွေ ထောင်စေပြီး တန်ပြန်ဆန္ဒပြခိုင်းတယ်။
ဒီလောက် ဟန့်တားနှောင့်ယှက်နေရုံနဲ့ မလုံလောက်သေးဘူးလို့ ယူဆလို့ရော ၊ ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ ဟန့်တားနှောင့်ယှက်မှုမျိုးစုံနဲ့ တစ်ကျိတ်ထဲ၊တစ်ဉာဏ်ထဲ၊တစ်သွေးထဲ၊တစ်သားထဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြဖို့သမ္မတဗိုလ်သိန်းစိန်ကိုယ်တိုင်ပွဲထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။
“ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို အခြေပြုသည့်တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအတွက် မဖြစ်မနေပြုလုပ်ရမည့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ များမှ ပေါ်ပေါက်လာသော သဘောတူညီချက်များအပေါ် မူတည်၍ လိုအပ်သလိုပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ရေးသားခြင်းများ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်” တဲ့။
သင်ကြားရခက်ခဲတဲ့ အမျိုးအစားတွေထဲမှာ စစ်ဗိုလ်ဟောင်း/သစ်တွေဟာ ထိပ်ဆုံးကရှိပါလိမ့်မယ်။
ထိုသူတို့ကို လူထုတိုက်ပွဲအင်အားနဲ့ သင်ကြားယဉ်ပါးစေခြင်းဖြင့်သာလျှင် သူတို့သည် အလွယ်တကူသင်ယူတတ်မြောက်၊ ယဉ်ကျေး၊လိမ္မာ လာကြလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ယူဆပါကြောင်း။
2 Responses to တူမောင်ညို – လူထုအင်အားနဲ့ သင်ကြားမှသာ သူတို့ ယဉ်ပါးလိမ္မာ လာကြလိမ့်မယ်
Htwe paing on June 3, 2014 at 10:16 am
I agreed with you. They need to getagood and well training, as animals. Animals would be better than them.
win on June 4, 2014 at 4:30 am